Kuti ugone kuita zvirinani manejimendi manejimendi, kuvandudza hunyanzvi hwekushanda, uye kuwedzera mazano ekushanda, musi waKurume 15, 2020, vashandi vemberi-vekugadzira vashandi vakarongedzwa kuitisa kudzidziswa kwevhiki-yekutevera. Chinyorwa chikuru cheichi chidzidzo chinosanganisira zvikamu zviviri: iko kushanda kwekugona kugona kwevashandi vekugadzira michina uye kugona kwe-panzvimbo saiti. Mangwanani ezuva regumi nematanhatu, achitungamirwa nemaneja wekugadzira, akaita kushanya kwakarongeka uye kudzidza. Mumasikati, akadzidza basa maererano nekuraira kwekuchinja, kunoenderana nehunyanzvi hwekushanda uye manejimendi manejimendi chinzvimbo. Munguva yese yekudzidza, vashandi vefekitori yedu vanorangwa, vanodzidza nemwoyo wese, vanokumbira mazano nekuzvininipisa, uye vanoratidza mweya wakanaka.
Musi waMay 10, 2020, zvakagadziriswa kuwedzera akati wandei michina yekudhinda zvipfeko uye yekutsika. Kuti udhindise zvirinani mhando dzemhando yepamusoro, inogona zvakare kushandiswa kune akasiyana machira zvigadzirwa. Kubva mukati nekunze, zvinopa iye anozvibata nechengeteko uye akasununguka kupfeka kunakidzwa. Panyaya yehunhu, kutsvaga kwekuchengeteka, kusadzima, kudzoreredzwa kwepamusoro, kudzora kwemhando yepamusoro, uye kuramba uchitsvaga shanduko uye nehunyanzvi mukugadzira, masitaera uye zvigadzirwa, kugadzira zvigadzirwa zviri nani.
Kuti uvandudze hunyanzvi hwekushanda uye mazano ekushanda, musi waGunyana 14, 2020, rega vashandi vanokodzera vatore chikamu muzvidzidzo zvezivo zvekutanga, izvo zvemukati zvekudzidza ndiko kuita chaiko kwezvakakosha zvemukati uye nepfungwa dzakabatana dzeruzivo rwekunze. Makwikwi eruzivo pakati pavo anoita kuti hunyanzvi hweindasitiri ruzivo ruwedzere uye rwakadzika Mumamiriro akasununguka uye anotyisa, vashandi vanozove nekunzwisisa kuri nani, uye mashandiro chaiwo masikati anozoita kuti vabudirire uye vabudirire.